Nangona i-subvocalizing, isenzo sokuthetha amazwi ngokuzenzekelayo xa ufunda , sinciphisa ukukhawuleza ukuba sinokufunda ngokukhawuleza, akusiyo imfuneko engathandekiyo. Njengoko u-Emerald Dechant uthi, "Kubonakala ngathi ukulandelwa kwentetho kuyingxenye yabo bonke, okanye phantse konke, ukucinga nokuba mhlawumbi 'kuthule' ukuthetha ... Incoko leyo inceda ukucinga kwaqondwa ngabafilosofi bokuqala kunye nabafundi beengqondo" ( Ukuqonda nokufundisa Kufunda ).
"Impembelelo enamandla kodwa ekhohlakeleyo ekuxutyushwa phantsi kwabafundi yintsingiselo yamagama akho abhaliweyo, awava phakathi kweentloko zawo njengoko zixhasayo - zihamba ngeenkqubo zengqondo zokuvelisa intetho, kodwa ingabangela ukuba izihlunu zentetho okanye izandi ezivelayo. isiqwenga sibonakala, abafundi baphulaphula le ntetho yengqondo njengokuthi uthethwe ngokuvakalayo.
"Nantso isigwebo esifanelekileyo. Zama ukuyifunda ngokuthula uze uphakamise.
KwakuyiThala leThala leLuntu laseBoston, evuliwe ngo-1852, eyasungula isithethe saseMerika samaelayibrari kawonkewonke avulekileyo avulekele bonke abemi.
Njengoko ufunda isivakalisi kufuneka uqaphele ikhefu ekuphumeni kwamagama emva kweThalayibhile kunye no-1852. . Ii .. Amagumbi okuphuza ahlula ukwaziswa kwesi sivakalisi zibe ngamacandelo abafundi abaxhamla ngokwahlukileyo. "
(Joe Glaser, Ukuqonda Indlela: Indlela eSebenzayo yokuphucula ukuBhala kwakho .
Oxford Univ. Cinezela, 1999)
Ukukhawuleza nokuSasaza kokuFunda
"Uninzi lwethu lufunda ngokuxhaswa (ukuthetha ngokwethu) amagama esicatshulwayo. Nangona ukuxhaswa kungasinceda sikhumbule oko sifundayo, kunciphisa indlela esinokuyifunda ngayo ngokukhawuleza. ukukhawuleza kwisantya sokuthetha; sinokufunda ngokukhawuleza ukuba asizange siguqulele amagama atyhiweyo kwikhowudi esekelwe kwinkulumo. "
Ingcongolo, ukuCognition: Iingcamango kunye nezicelo , ngo-9. Cengage, 2012)
"[R] ukufundisa i-theorists ezifana neGough (1972) bakholelwa ukuba ekufundeni ngokukhawuleza ngokukhawuleza, ukuxhaswa okwenziwe ngokukhawulezileyo akunakwenzeka okokuba isantya sokufunda ngokucace kamsinya kunokuba kwenzeke ntoni xa abafundi bethetha ngelizwi ngalinye silunye xa befunda. Isantya sokufunda esicacileyo kwi-12th graders xa kufundwa intsingiselo ngamazwi angama-250 ngomzuzu, ngelixa isivinini sokufunda ngomlomo ngamazwi angama-150 ngomzuzu (uCarver, 1990) Nangona kunjalo, ekuqaleni kokufunda, xa inkqubo yokuqaphela igama ihamba ngokukhawuleza kunokuba kufunde ukuqonda ngokufanelekileyo, ukuxhaswa ... kunokuthi kwenzeke ngenxa yokuba ijubane lokufunda lucotha kakhulu. "
(I-Jay Jay Samuels "Ngomzekelo Wokufunda Ukuqonda." Uluphi Uphando oluthethayo malunga nokufundiswa ngokufanelekileyo, i-eds, i-SJ Samuels kunye ne-AE Farstrup.
Ukuqondisisa nokuFunda nokuqonda
"[R] ukuqala ukuvuselelwa komyalezo (njengokufunda imephu), kwaye ukuqonda ukuqonda kwengqondo kuxhomekeke ekusebenziseni zonke iingongoma ezikhoyo. ikhono lokucwangcisa kwi-extraction of meanings using both conteantic and syntactic context in reading.
Abafundi kufuneka bahlole ukuqinisekiswa kweziprofeto zabo ekufundeni ngokubona ukuba bavelise izakhi zolwimi njengoko bezazi nokuba ngaba baqonda. . . .
"Isishwankathelo, impendulo eyaneleyo ekufuneni ngoko ifuna okungakumbi kunokubonakalisa nje kunye nokuqatshelwa koqwalaselo lwegama elibhaliweyo."
(I-Emerald Dechant, Ukuqonda nokuFundisa ukuFunda: Umzekelo wokuSebenzisana . URoutledge, 1991)
" Ukuxhaswa (okanye ukufunda ngokuzenzekelayo) akukwazi ukuba negalelo kukuqonda okanye ukuqonda ngaphezu kokufunda ngokuvakalayo. Ngokwenene, njengokufunda ngokuvakalayo, ukuxhaswa komsebenzi kungenziwa kuphela nantoni efana nesantya esiqhelekileyo kunye nesantya xa kulandelwa ukuqonda Asiziphulaphuli iziganeko zamagama okanye iziqendu zamabinzana uze uziqonde.
Ukuba nantoni na, ukuxhaswa kwamatyala kunciphisa abafundi phantsi kwaye kuphazamise ukuqonda. Umkhwa wokunciphisa unokuphulwa ngaphandle kokulahlekelwa kwengqiqo (Hardyck & Petrinovich, 1970). "
(UFrank Smith, UkuFunda ukuqonda , umhla we-6 uRoutledge, ngo-2011)
Izifundo eziPhakamileyo ze-Interest-Imfundo-I-Architecture yezo zonke i-Ages
I-Negative Slope yoMgca